Muqdisho: Sirdoonka Dawladda Soomaaliya Oo Qabtay Koombiyuutarro Lagu Rakibay Walxaha Qarxa | Berberatoday.com
Muqdisho: Sirdoonka Dawladda Soomaaliya Oo Qabtay Koombiyuutarro Lagu Rakibay Walxaha Qarxa
Muqdisho(Berberatoday.com)-Ciidamada Hay’adda Nabadsugida Soomaaliya ee loo yaqaanno NISA ayaa howlgal ka sameeyay guri ku yaala degmada Hawl-wadaag, gaar ahaan xaafadda Nasrudiin ee Magaalada Muqdisho, halkaasoo lagu diyaarinayay qaraxyo, ayaa gacanta ku dhigay Laptop-yo lagu diyaariyay qaraxyo iyo agabyo kale oo warqado iyo gaadhi uu ku jiray.
Howl-galkan oo dhacay doraad, ayaa Ciidanka NISA ugu suurta gashay inay qabtaan nin lagu tuhunsan yahay inuu diyaarinayay qaraxyadan, waxaana lala qabtay illaa todobo Laptop oo qaarkood lagu rakibay qaraxyo.
NISA ayaa sheegtay in xogta ninkan ay hayeen, isla markaana ay muddo ay daba joogeen Laamaha ammaanka, isla markaana ugu dambeyn si qorsheysan ciidamada gacanta ku soo dhigeen nin kan iyo qalabkii uu ku abaabulayay qaraxyadda sida ay laamaha Amaanka Xaqiijiyeen.
Maamulka gobolka Banaadir oo qeyb ahaan amniga Muqdisho qaabilsan ayaa soo bandhigay qalabka iyo gaadhi.
Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir C/fitaax Cumar Xalane ayaa sheegay in laamaha amniga ay la wareegeen laptop-yada iyo ninka laguna xidhay mid ka mid ah goobaha la geeyo dadka falalkaasi lagu soo qabto.